Mini Wireless WIFI Spy Hidden Pinhole Camera, duubitaan 70hrs ah, heesi 100hrs ah (SPY032) | Xalka OMG
TOP SPY Hidden Camera Camera Recorder & Finder for Office, Home, Gudaha / Gudaha albaabka (Singapore / Jakarta)
Whatsapp: Singapore +65 8333-4466, Jakarta +62 81293-415255 (51 Ubi Ave 1 # 05-07A Level 7, S408933 - Furan: Isniinta-Sabtiga: 10 am-6pm)
Qalabka 'Endoscope camera' ee Bore
Sawirro qarsoodi ah
Basaas Audio Voice Recorder
Cabbirka Ammaanka ee Qarsoon
Alaarmiga Argagaxa Degdega ah
Man Down System / Solution Safety Worker Lone
OMG Mini Wireless WIFI Spy Hidden Pinhole Camera, 35 - 70hrs duubitaan, 100hrs imurasilẹ (SPY032)
Qalabkan qarsoodiga ah ee qarsoodiga ah waa dunida kamarad yar, waxay ku haboon tahay dhammaan noocyada qalabka la qaadan karo.
Diiwaanada Kaydka ee Qarsoon Aad u yar iyo Nabadgelyo, Naqshad jajaban, sida badhanka; Taageer kaarka TF-ga ilaa 32GB (Lama darayo); Taageerada duubista iyo lacag-bixinta isla markiiba, taageerida faashadda fiidiyowga.
Wi-Fi-ga WiFi, fududahay in la isticmaalo: (Muhiim: Fadlan ku dhaji Kaarkaaga TF ka hor intaadan isticmaalin !!!) Sawiradan Hiddo-ga ah ayaa leh WiFi: Xalka HiSilicon ee ugu cuslaa wuxuu keenaa isku xirka WIFI oo deggan. Taageero Local iyo Remote Connect, masaafada WiFi ee ku saabsan 10m-20m, Maareynta Password si loo ilaaliyo asturnaantaada. Talooyin: Shardi u ah xiriirka fog-fog wuxuu hubinayaa in taleefanka gacanta uu u geli karo internetka: WIFI ama network mobile phone.
Sifeynta Muuqaalka: Marka dhaqdhaqaaqa la ogaado, kamaradku wuxuu bilaabi doonaa duubista si toos ah. Iyadoo la duubayo Real-Time Video Recording, qalabkaan yar ayaa si daacad ah u qori doona ficilkaaga marti-gelinta ee aan la socon oo waqti-gaaban ah isla markaana daqiiqad kasta oo fiidiyo ah oo fiidiyo ah waa 1 daqiiqo.
la taaban karo: Xaqiijinta Video: True HD 1280x720P, keena fiidiyowga sare ee muuqaalka iyo tayada sawirka. Iyadoo 10,000 mAh batari lithium, duubista fiidiyowga ee joogtada ah ee 400. Isku xiridda telefoonka gacanta / kiniinada / kombuyuutarka adigoo raadinaya sawirada WiFi-ga. Waad ka daawan kartaa video ka camera wakhtiga. Looma baahna runtii WiFi si aad u gudbiso.
(1) Kormeer iyo hubso gudaha gudaha sida qolalka jiifka, guryaha, qolalka qoyska, guryaha xanaanada, garaashyada, guryaha martida, iyo wax kale.
(2) Sawir qaade, dad xayawaan ah ama si loo hubiyo in qaraabadaada waayeelka ah ay badbaado iyo caafimaad qabaan.
(3) Kamaradu waxay ilaalinaysaa gurigaaga adiga oo ka ilaaliya qoryaha.
Xalka wireless-ka ee cusub ee Hisilicon chip wireless wuxuu bixiyaa isku xirnaan aan kala go 'lahayn, xasiloonida WIFI.
Kaamirooyinkaan Waamiga ah ee fiidiyowga ee Wifi waa 30m, taasoo u siineysa isticmaaleha xulashooyin badan meesha uu ku dhigayo.
Xalka Fiidiyowga: Xaqiiqada HD 1280 x 720P, Waxay bixisaa muuqaalo muuqaal sare ah iyo tayada sawirka
Ku-dhex-dhawaad ​​10,000 mAh batari lithium ah: duubitaan joogto ah illaa 900 daqiiqo.
MAX waxay taageertaa kaararka SD-ga 32GB.
Laydh aad u yar iyo mug weyn, sidaa darteed si fudud waad u qarin kartaa iyada oo aan la arkin. Xafiiska, safarka, dukaanada, nabadgelyada guriga ee adeegsiga kaladuwan (caruurta, xayawaanka guryaha lagu haysto, kuwa caruurta haya, dadka da'da ah).
Diiwaangelinta loop waa la cadeeyey inuu ku qoran yahay faylka ugu da'da weyn ee ugu cusleysaa.
Dhiirranaanta Muuqaalka: Marka dhaqdhaqaaqa la ogaado, kamaraduhu waxay bilaabi doonaan duubista si toos ah.
Taariikhda iyo watiyada wakhtiga la is raaci karo.
Shayga wuxuu ku qalabeysan yahay 2.0 oo xawaare aad u sareeya ku shaqeeya, sidaa darteed waqti yar ayey qaadataa in la dallaco.
Adigoo isticmaalaya awooda moobaylka, kuxir wax ku dalaca.
Tilmaamo diiran: Maaddaama tani ay tahay kaameeraha badhanka, fadlan haku xirmin fiilada hana ilaalin.
Kuxiro Kaameeraha: Si aad u daawato fiidiyowga waqtiga-dhabta ah, waxaa jira 2 dariiqo: midka waa Muuqaalka Maxalliga ah ee loo maro isku xirka WIFI. Jidka kale waa aragti fog oo fog.
Isticmaalaha fudud ee adeegsadaha, kontaroolada waa sahlan tahay in la isticmaalo, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dadka isticmaala.
Xalka Fiidiyowga: Xaqiiqada HD 1280 x 720P, Waxay bixisaa muuqaalo muuqaal sare ah iyo tayada sawirka.
DIY Button Lens:
Noocyo kala duwan oo kala duwan oo ah baahidaada kala duwan ee baahidaada kala duwan ee ku saleysan deegaankaaga ayaa ku siinaya fursad aad ku xirato badhanka furka ee khadadka kamaradaha kamaradaha oo si fudud u dhuumanaya kuna qaadi kara.
Taageerada duubista iyo lacag-bixinta isku mar,
Taageerada duubista video,
Taageerada 32GB micro SD Card ee Max (Kuma jiraan)
Taageero Local iyo Remote connect, Masaafada WiFi ee ku saabsan 30m, Maareynta Password si loo ilaaliyo asturnaantaada.
Talooyin: horudhaca xiriirka fog-fog ayaa hubinaya in taleefanka gacanta uu u geli karo internetka: WIFI AM ama shabakadda taleefanka gacanta.
Sifeynta Muuqaalka: Markii dhaqdhaqaaq la ogaado, kaameeradu waxay bilaabi doontaa duubista si otomaatig ah. Iyo Rikoor Video-ka-waqtiga-dhabta ah, qalabkan yar ayaa si aamin ah u duubi doona ficilka martidaada ee aan la ilaalinin waqtiga-dhabta ah iyo fiidiyow kasta oo fiidiyoow ah waa 1 daqiiqo. Waxay taageertaa duubista fiidiyoowga waqtiga-dhabta ah.
Xalinta Video: Run HD HD 1280 x 720P,
Batariyoonka Liitiyada: 10,000 Mah
Diiwaan gelinta fiidiyowga ee joogtada ah ilaa 900 daqiiqo.
Isku xiridda telefoonka gacanta / kiniinada / kombuyuutarka adigoo raadinaya sawirada WiFi-ga. Waad ka daawan kartaa video ka camera wakhtiga.
Looma baahna runtii WiFi si aad u gudbiso.
Cabbirka wax soo saarka: 4.7 x 2.4 x 3 inches
Miisaanka Item: 178g
SPY032 - WIFI Sawir gacmeedka sawir gacmeedka ah
32163 Wadarta Views 6 Views Maanta
emayl: sales@omg-solutions.com ama
Farriinta (Baabuurta Warbaahinta) *
Maqaallada - Kaamiradda Spy
Gawaarida Gawaarida Gaari
Qalabka Sawirka Ciriiriga
Koobka / Dhalada Suwaasha
Qalabka Sawirada Qarsoon
OMG ayaa lagu taliyay
Kuwo kale Sawir Qaadeysan
Sawir Sawir Kombiyuutarka
Qalabka Qalabka Jilidda
Kaamirooyinka wax lagu basaaso ee la qaadan karo
Kaameeraha Awooda Korantada
Koobi USB ah
Wallet Hidden Camera
Kaamirooyinka Xarka Leh
H.264 Video Compression Ogeysiinta Dhaqanka Habeenka Aragga Helitaanka Meelaha WIFI
Kaamiro qarsoon ama kamarad wax basaasa ayaa wali ah ama kamarad muuqaal ah oo loo adeegsado duubista fiidiyowga (badiyaa waxay la timaadaa maqal) shaqsiyan iyada oo aan maadooyinka aqoontiisa laga helin iyo ogolaansho. Kaamirooyinka wax basaasa waxaa badanaa loo adeegsadaa howlaha la socodka laakiin mararka qaar waxaa loo adeegsadaa ujeedooyin ganacsi.
Kaamirooyinka qarsoon ayaa gacan ka gaystay soo bandhigida naxariis darada iyo daryeel dayaca. Go'aannada ku saabsan adeegsiga kaamerooyinka basaasiga ah ee qarsoon waa mid aad u adag - waxaad u baahan tahay inaad isku dheellitirto inta aad ilaalinayso nabdoonaanta qof iyo inaad xushmeyso xuquuqdooda asturnaanta.